ह्यापअप एडमिनिस्ट्रेशन - एक पूर्ण गाइड - आईटीटी टेक स्कूल
8 जुन 2017
ह्यापअप एडमिनिस्ट्रेशन - एक पूर्ण मार्गदर्शक
हडप्याप प्रशासनको लागि एक पूर्ण मार्गदर्शक
ह्यापअप प्रशिक्षणको फाइदा
ह्यान्डूप प्रमाणीकरण प्रक्रिया
5 वर्ष भन्दा माथिमा, Hadoop ले मात्र विश्व डेटाको ठूलो भाग प्रशोधन गर्नेछ। नयाँ प्रविधि गर्म छ, र कम्पनीहरूले ह्यापअप प्रमाणीकरण भएका उम्मेदवारहरूको आवश्यक आवश्यकतामा छन्।
जावा प्रोग्रामिंग प्रणाली Hadoop लाई मात्र खुल्ला स्रोत हो र पीसी हालत भित्र पाइएको ठूलो र ठूलो मात्रामा डाटा सेटहरू तयारीको लागि हो। जस्तै ह्यापअपले डेटा, कम्पनीहरू र संगठनहरू तयार पार्ने र यसको लागत व्यवहार्यताको लागि मोडेलको तिरस्कार गर्नका लागि सामान्य सेवाहरूको प्रयोग गर्दछ। प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क को विभिन्न फायदे विभिन्न प्रकार को डेटा को व्यापक रूप देखि, स्केलेबिलिटी, डेटा स्थानीयहरु को अनुकूलन, ठूलो हब bunches को समर्थन, र एक स्वचालित तरिका मा failovers को प्रबंधन वितरित को समानांतर तैयारी को शामिल गरेको छ।
हाउपअप प्रशासन ढाँचाको2प्रमुख खण्डहरू MapReduce र HDFS समावेश गर्दछ। ह्यापअप विभाजन प्रत्येक प्रगतिशील डेटा भागमा सानो डाटा प्याक वा लुम्प्समा राख्छन् र यी डेटा प्याकेटहरू अलग र विविध विविध केन्द्रहरूमा टाढा राख्छन्, केन्द्रहरू समूहभित्र अवस्थित हुन्छन्। ह्यापअप असाधारण समय कुशल छ र यसको समय अवधि को वृत्तको स्मृतिमा विशाल वा सानो डेटा राख्नुको लागि धेरै सानो छ। ह्यापअपले पनि विभिन्न यन्त्रहरूमा सबै डेटालाई दोहोर्याउँछ जुन समूहभित्र अवस्थित छ र डुप्लिकेटहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकृति कारकमा हुन्छन्। जस्तै विभिन्न डेटा डुप्लिकेटहरू एकै समयमा तयार गर्न सकिन्छ, डेटा ह्यान्डल टाइम कम हुन्छ।
ह्यापअप प्रमाणीकरण यसरी यसरी देखाउँछ कि तपाई एक संगठनको उत्पादकता बढाउन डेटा व्यवस्थापन ढाँचा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीहरू आज ह्यापअप प्रमाणिकरण धारकहरूको निरन्तर खोजीमा छन्, जसले तपाईंको विश्वसनीयता र क्षमताहरू देखाउँदछ जुन बिग डेटा ह्यान्डलिंगसँग सम्बन्धित कार्य दायित्वहरू लिनको लागि आदर्श छन्।
तपाईंको क्यारियरको लागि हाउपप प्रमाणीकरण किन?
ह्यापअप धेरै डाटाहरू सम्बोधन गर्ने नयाँ तरिका हो, र Hadoop ग्यारेन्टी पेशेवरहरूलाई बीमा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, खुद्रा, जीवनशैली र धेरै फरक व्यवसाय खण्डहरू र ऊर्ध्वाधरमा आवश्यक पर्दछ। ह्यापअपको कार्यान्वयन निकै प्रभावकारी भएको छ र नयाँ टेक्नोलोजी समायोजन गर्न धेरै आईटी प्रविधिहरुले आफ्नो क्यारियर पथ परिवर्तन गरेको छ। ह्यापअप हाल मैनुफ्रेम, जाभा, र डेटा गोदाममा अनुकूलित र आगामी भविष्यमा, नयाँ ढाँचा डेटा विश्लेषण र तयारीमा मुख्य निर्णय हुनेछ।
ह्यापअप प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण दुवै पेशेवर आईटी पेशेवरहरु र ताजा को लागि विभिन्न फायदे छन्।
प्रमाणीकरण मा मांग छ र कम्पनी सक्रिय रूपमा ह्यापअप प्रमाणीकरण र क्षमताहरू छन् जो उम्मेदवारहरु खोज्दै छन्।
ह्यापअप प्रमाणीकरणले तपाईंलाई वेतन र स्थिति दुवैमा चढाउँदछ, र तपाइँ प्रभावकारी तरिकालाई पारित भएपछि अरू भन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ।
ती ह्यान्डप फ्रेमवर्क र शर्तमा ती नयाँ प्रमाण प्रमाणीकरण पास गर्न सकिन्छ र यसले के प्राप्त गर्दछ र ढाँचा र यसको कार्यान्वयनमा अनुमोदनको लागि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ।
प्रशिक्षण वास्तविक समय हो र तपाईंलाई वास्तविक विश्व परिस्थिति र डेटा ह्यान्डल गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, प्रमाणीकरणले तपाइँलाई प्रतिष्ठित क्षेत्रहरूमा संलग्नहरूलाई तल हटाउनुभयो भनेर देखाउँछ।
तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिको सबै पहलुहरु को बारे मा जान्दछ र कम्पनी द्वारा नियोजित हुँदा अरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
ह्यापअप प्रमाणीकरणको लागि तयारी गर्ने चरण निर्देशनहरूद्वारा चरण
Hadoop प्रमाणीकरण पाठ्यक्रममा 30 घण्टाको अनलाइन र लाइव प्रशिक्षण जुन प्रशिक्षित, अधिकृत र प्रमाणित निर्देशकहरू द्वारा व्यवस्थित र व्यवस्थित गरिन्छ। तपाईंले समयको लागि केहि अनुकूलन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं पाठ्यक्रम जान्न चाहानुहुन्छ। तपाईं पनि असाइनमेन्ट लिनु पर्नेछ, र वास्तविक जीवन मामलाले तपाईलाई सहयोग पुर्याउँछ जुन वास्तविक विश्व व्यवसाय परिदृश्यमा संलग्न रहेको छ। पाठ्यक्रम सिक्नका लागि आवश्यक केही कम समस्याहरू छन्, किनकि एक अग्रणी अनलाइन कोर्स आपूर्तिकर्ताले तपाईलाई 24 *7उपलब्ध अनलाइन ब्लेस्टर प्रदान गर्दछ जुन विशेषज्ञहरूबाट सीधा हुन्छ। तपाईं छलफलहरूमा पनि पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ विभाजन सम्बन्धी अन्तरक्रियाको मार्गदर्शन र अरूको सहभागीहरू प्राप्त गर्दा तपाईंको अन्तरदृष्टि साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। यी फाइदाहरू र पाठ्यक्रमको शिक्षा फाइदाहरूको अलावा, तपाइँले सिक्ने व्यवस्थापन प्रबन्धकलाई पनि पहुँच राख्नुहुन्छ, जसले लगातार तपाईंको अन्तर्दृष्टि र क्षमताको स्तरवृद्धि गर्दछ र तपाइँले हालैको अपग्रेड र ह्यापअप सम्बन्धमा परिवर्तनको साथ abreast बनाउनुहुन्छ।
Hadoop प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम द्वारा सुरक्षित मुख्य विषयहरू र विषयवस्तुहरू समावेश छन्:
ह्यान्डपप र बिग डेटा वास्तुकला
उन्नत एचबीase र हाइइभ
ह्यापप र ओओसी विस्तारित
Apache स्पार्कको प्रयोग गरी डेटाको प्रसोधन र परिसंचरण
अनलाइन शिक्षाको आधारले तपाइँको पीसी ढाँचा भित्र भर्चुअल मेमोरी सेट अप गर्नेछ र तपाईंलाई स्थानीय पहुँचको साथ प्रस्तुत गर्नेछ। LMS वा लर्निंग व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै डाउनलोड र स्थापना सम्बन्धित जानकारी हुनेछ जुन तपाईले अनुभव अनुभव गर्नुपर्छ। केस अध्ययनहरू पाठ्यक्रमको अन्त्यमा आउनेछन् र वास्तविक समयमा बिग डाटामा एनालिटिक्स प्रदर्शन गर्न HIVE, PIG, MapReduce र HBase जस्ता वास्तुकला रेत ढाँचाहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो मामला अध्ययन उद्योग-विशेष हो र मिडिया, विमानन, रिटेल, वित्त, र अन्य सहित व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
जस्तै सबै शिक्षण र प्रशिक्षण सत्र LMS भित्र टाढाको छ, तपाईले कुनै पनि कक्षाको हानिलाई महसुस गर्नुहुने छैन र उनीहरूलाई कुनै पनि समयमा उनीहरूको अनुभव गर्न सक्दछन्। LMS को बाहेक, प्रत्यक्ष सत्रहरूले फरक ब्याचहरूको लागि पुन: कक्षाहरू पनि चलाउँछ र तपाईंले निम्न ठेगाना वा कक्षा सत्रमा भएका विषयहरू सिक्न सक्नुहुन्छ।
ह्यान्डअप प्रमाणीकरणको लागि के हो?
जबकि Hadoop प्रमाणीकरण को लागि चयन को लागि कुनै आवश्यकताहरु, यो बेहतर मौका छ कि तपाईं एसएल र कोर जाभा संग सम्बन्धित जानकारी छ। तपाईं जाभा अल्पसंख्यकहरू सिक्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूलाई अन्य ट्रान्जिङ पाठ्यक्रममा सामेल गरेर ब्रश गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई कम्तिमा4GB को रामसँग एक पीसी चाहिन्छ, साथै अनलाइन पाठ्यक्रममा सामेल हुन र यसलाई प्रभावकारी तरिकाले सिक्नको लागी आईएक्सएनमक्स प्रोसेसर (वा थप उन्नत)। यदि तपाइँ ढाँचा आवश्यकताहरू मध्ये कुनै पनि प्राप्त गर्न असफल भएमा, तपाइँलाई तपाइँको प्रमाणिकरण आधार द्वारा Hadoop समूहमा रिमोट पहुँच पनि गर्न सकिन्छ।
किन ह्यापअप प्रशिक्षण तपाईंको क्यारियरको लागि हो?
उत्कृष्ट आकार को MNC सहित दुनिया को सबै भन्दा राम्रो कम्पनीहरु आईटी पेशेवरों को आवश्यकता हो जो को उपयोग गर्न को लागि या भंडारण को ठूलो मात्रा को प्रबंधन गर्न सक्छन्। डाटा आकार अत्यन्त अधिक शक्तिशाली र निकाल्न सकिने सही र सही जानकारी यो एक असाधारण समस्या हुन सक्छ कार्य बाहिर हुन सक्छ। ह्यापअप प्रमाणीकरण पास गर्ने व्यक्तिहरूले प्रभावकारी ढंगले लक्ष्यको तुलनामा सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्। ह्यापअप ढाँचाले जुनसुकै गुणात्मक हप्ता र महिनाको बढ्दो प्रासंगिक र सार्वभौमिक हुने मौका पाइरहेको छ, यस क्षेत्रमा एक प्रमाणिकरणले तपाईंलाई विशेषतामा धेरै उपलब्धि दिन्छ।
ह्यापअप प्रशिक्षण केन्द्रहरू तपाइँका सबै ठूला ठूला डाटा क्षमताहरू तयारी गर्दै छन् र तपाईले बिग डाटा प्रोसेसरलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। प्रशिक्षण तल हातहरू MapReduce, HDFS, HBase, सुँग, हिव, Sqoop, Oozie र अन्य डेटा हस्तशिल्प को वातावरण स्वीकृत प्रक्रियाहरु संग सम्बन्धित छन्। ह्यापअप प्रशिक्षणले तपाइँलाई आवश्यक क्षमताहरू र क्षेत्रहरूमा सिक्छ:
विभिन्न प्रकारका डाटा फ्रेमवर्कहरू
Hadoop 2x वास्तुकला को समझ
ह्यापअप समूहको सेटअप र मन बोगग्ल्याङ नक्शा कम कार्यक्रमहरू रचना
Hive, Pig, र YARN को विभिन्न वास्तुकलाहरु र मोडेलहरु को बीच प्रयोग गरेर डेटा विश्लेषण मा शुरू
एच बेस को कम गर्न र कार्यान्वयन को एकीकरण
ओोजी मार्फत व्यवसायको योजना
स्पार्क र यसको सम्पूर्ण जैविक प्रणाली को आरडीडी को समझ मा काम गर्दछ
वास्तविक जीवन मा एक शट ले भारी डेटा संग सम्बन्धित विश्लेषिकीहरु लाई विस्तारित र जांच गर्दछ।
ढिलो अध्ययनले पनि संकेत गर्दछ कि बिग डाटा हैंडलिंग ढाँचाको रूपमा होडिपको महत्व केवल निकट भविष्यमा बढ्न जाँदैछ। त्यसो भएमा हङकङ बजारले 99.31 डलरको वर्ष 2022 भन्दा बढी हुनेछ, र निकट भविष्यमा 42.1 को आसपासको दरमा विकास गर्नेछ।
धेरै ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला दलहरु छन्। ईन्जिनियरहरू, आर्किटेक्ट्स, परीक्षण, बीआई, डीडीडब्ल्यू र ईटीएल प्रविधिको सबैले आफ्नो लिपि विस्तार गर्न र धेरै डेटा संकलन गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सिक्न सक्छन्।
अनलाइन ह्यापअप प्रशिक्षण एजेन्सीको मालिकले तपाइँको अन्तिम उद्यमको जाँच गर्नेछ, र त्यस मौकामा तपाइँ सफलतापूर्वक प्रमाणपत्र पास गर्नुहुनेछ, तपाईंलाई बिग डाटा र ह्यापअप प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। प्रमाणीकरण स्वीकृति र विशाल स्वीकृतिको मूल्यांकन गर्दछ। धेरै प्रमुख कम्पनी र MNCs प्रसिद्ध अनलाइन कोचिंग र प्रशिक्षण आधारहरु को प्रशिक्षण साझेदार हुन्, र यिनीहरुमा विप्रो, नोकिया, सिस्को, फोर्ड, आईबीएम र जस्तै शामिल छन्। तपाईले पछि आश्वस्त हुन सक्नुहुनेछ कि तपाइँको प्रमाणिकरण प्रामाणिक छ र तपाईले उच्च कुपोषण र वेतनको स्थानमा प्रस्तुत गरिने छ।
Hadoop प्रमाणिकरणले तपाइँलाई $ 98 के वेतनको लागि योग्य वा प्रगतिशील र अनुभवको साथ योग्य बनाउनेछ, पुनरावृत्ति थप बढ्छ। अब तपाईका लागि 4.4 मिलियन प्रमुख डेटा व्यवसायहरू भन्दा बढी छन्, र खुला दरवाजे 12% को दरमा बढ्दै जान्छ। ह्यापअप डिजाइनरहरू सबै भन्दा उत्तम छन् र सबै भन्दा बढी डेटा निर्माण पछि लगाइएका छन्, र तपाइँ नयाँ क्या क्यारियर स्कुलिन्सको खोजी गर्नको लागी अब ब्यान्डविगनमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
ITIL प्रमाणन क्यारियर अवसरों
ITIL प्रमाणीकरण - एक पूर्ण मार्गदर्शक
ह्यापअप डेभलपर क्रयाक गर्दै साक्षात्कार - तपाईंले के गर्नु पर्छ र के गर्नु पर्छ?
10 कुराहरु तपाईंलाई R, Python, and Hadoop को बारे मा ठेगाना हुनु पर्छ